Orinasa sy mpanamboatra bracelet vita amin'ny silamo China | SJJ
Ny fehin-tànana silipo sy ny fehin-tànana manokana dia singa fampiroboroboana lafo vidy ampiasaina amin'ny fanangonana vola, hetsika ary asa soa. Vita amin'ny siligaon 100%, ora maharitra ary ora fanaterana haingana.
Fehin-tànana Silipoary ny fehin-tànana no vokatray, izay be mpitia eran'izao tontolo izao. Ny fehin-tànana vita amin'ny silika dia malaza amin'ny kalitao tsara indrindra sy ny silika vita amin'ny silika. Ny silikaly fitaovana dia tontolo iainana sy ny sakafo kilasy, mahazaka ambany na avo mari-pana, toy izany koa nyFehin-tànana Silipoary ny fehin-tànana dia azo ampiasaina amin'ny toerana samihafa sy ny vanim-potoana rehetra. Malefaka sy malefaka ho an'ny ankizy ny fehin-tànana vita amin'ny silika, ka malaza any an-tsekoly izy ireo. Ireo fehin-tànana silika dia malefaka ihany koa ary matanjaka ampy hampiasan'ny olon-dehibe amin'ny fampiroboroboana na hetsika toy ny fanatanjahan-tena, karnavaly na antoko hafa. Ny logo samihafa dia azo alaina embossed, debossed, fanontana na laser voasokitra arakaraka ny angatahinao. Samy hafa ny endrika hamaliana ny fangatahana ataonao, hanehoana ny hevitrao momba ny logo, ary haharitra haharitra mandritra ny fotoana maharitra. nySilacona braceletNy s sy ny fehin-tanana dia vita amin'ny habe mahazatra ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe, saingy namboarina ihany koa izy ireo arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny tantara 36 taona mahery, ny orinasanay dia afaka manome fehin-tànana sy fehin-tànana avo lenta amin'ny fotoana fohy. Manana traikefa manan-karena amin'ny baiko goavambe ho an'ny Silicon Bracelets sy ny fehin-tànana izahay, fa na inona na inona baiko lehibe na baiko kely dia raisina amin'ny fotoana rehetra. Homena ny asan'ny zavakanto ho fankatoavana anao alohan'ny santionany na famokarana. Matihanina ny mpiasanay ary mahay miteny anglisy ny tovovavy mpivarotra. Manantena ny fanontanianao izahay!
Fitaovana: silipo avo lenta
Size: Ny habe mahazatra dia 202 * 12 * 2 mm ho an'ny olon-dehibe, 190 * 12 * 2 mm ho an'ny ankizy. Ny habe namboarina dia ekena.
Loko: afaka mifanaraka amin'ny loko PMS, fihodinana, fizarana, loko manjelanjelatra ary maivana dia azo ampiasaina ihany koa.
Logos: Ireo logo dia azo atao pirinty, navoakan'ny olona, ​​navoakan'ny endriny, mifamatotra amin'ny ranomainty, sokitra tamin'ny laser ary ny hafa
Tsy misy miraiki-po.
Fonosana: kitapo pc / poly 1, na araky ny mpanjifa
MOQ: Tsy misy fetra MOQ
Teo aloha: Fitaovana fanoratana
Fehiloha Silika Kristiana
Silicon Bracelets Bulk
Silicon Bracelets mora vidy
Fehin-tànana vita amin'ny lamba vita amin'ny silika
Fehin-tànana vita amin'ny silipo
Photo Etch keychains
Pin Lapel nohenjanina